myannewsmedia.com – Page 6
မအူပင်မြို့ တပ်ထောက်ခံပွဲတွင် “သွေးသစ္စာ”သီချင်း မှားဖွင့်မိသဖြင့် ကားပိုင်ရှင်ကိုရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးပြီး ကားကိုလည်း သိမ်းဆည်းသွား
November 2, 2021 November 2, 2021 - by kko - LeaveaComment
မအူပင်မြို့ တပ်ထောက်ခံပွဲတွင် “သွေးသစ္စာ”သီချင်း မှားဖွင့်မိသဖြင့် ကားပိုင်ရှင်ကိုဖမ်းဆီးပြီး ကားကိုလည်းသိမ်းဆည်းသွား ဧရာဝတီတိုင်း၊ မအူပင်မြို့တွင် ယနေ့(နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်) မနက်ပိုင်းက တပ်ထောက်ခံပွဲပြုလုပ် နေစဉ် ကြွေးကြော်သီချင်းများဖွင့်ရာတွင် စစ်အာ ဏာရှင်တော်လှန်ရေးသီချင်းဖြစ်သည့် ”သွေးသစ္စာ” သီချင်းမှားဖွင့်မိသဖြင့် တပ်ထောက်ခံပွဲလှည့်လည်ရာ တွင်အသုံးပြုသည့် ကားနှင့်သီချင်းဖွင့်သော ကားပိုင်ရှင်အားစစ်ကောင်စီက ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း ဒေသခံများထံကသိရသည်။ မအူပင်မြို့ မြို့သစ် (၂)လမ်းနေ ဦးလှဌေး …
ဘီလျံနာသူဌေးကြီးတွေ အများဆုံး နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာ့မြို့ကြီး ၁၀ မြို့
ဘီလျံနာ ဆိုတာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀၀ အထက် ကြွယ်ဝချမ်းသာသူတွေကို ခေါ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြပြီး ဖြစ်မှာပါ။ ကမ္ဘာကျော် စီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်းဖြစ်တဲ့ Forbes ရဲ့ စာရင်းအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ထိ ကမ္ဘာမှာ ဘီလျံနာပေါင်း ၂၇၅၅ ဦး ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ဘီလျံနာ ၁၀ ယောက်မှာ ၈ ယောက်က …
(၁၅ ပေ) ရှည်သော ဧရာမ မိကျောင်းကြီးကို ခလေးများစာသင်နေသော ကျောင်းနောက် မှ တူးမြောင်းထဲတွင် တွေ့လိုက်ရသောအခါ…. တစ်ကောင်ရောက်ရှိနေကြောင်း သတင်းပေးပို့လာသဖြင့် သစ်တောအဖွဲ့နှင့်တာဝန်ရှိသူများမှ အချိန် ၁၀ နာရီအကြာ ဖမ်းဆီးကာ ဘက်ဟိုးဖြင့် သယ်ဆောင်သွား ခဲ့ကြရသည်။မိကျောင်း၏ အလေးချိန်မှာ ကီလို ၈၀၀ အလေးချိန်ရှိပြီး အရှည် (၄.၅ မီတာ) (၁၅ ပေ) ရှည်သည်ဟု …
September 19, 2021 September 19, 2021 - by kko - LeaveaComment
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ လက်ရှိရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကတော့ Peril ဆိုတဲ့စာအုပ်ပါပဲ။ ဒီစာအုပ်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲရှုံးပီးနောက် ရှုံးမဲမဲပြီး စိတ်ကယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်နေတဲ့ Trump ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေအကြောင်းကို ရေးသားထားတာပါ။ ဒီထဲမှာ အဓိကပြသနာဖြစ်လာရတာကတော့ အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ အကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်စစ်ဦးစီးချုပ်များဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Mike Milley ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍပါပဲ။ သူရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ အံ့မခန်းပါပဲ။ ပထမဆုံး ထရန့်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲရှုံးပီဆိုတာ သေချာတဲ့နောက် ရွေးကောက်ပွဲအဖြေကို …
September 18, 2021 September 18, 2021 - by kko - LeaveaComment
ဒီမယ်ဗျာ့ ဘယ် PDF ကမှ ပြည်သူ့ပိုက်ဆံကို ဓားပြမတိုက်ပါဘူး ပြည်သူကိုလဲ ဒုက္ခမ​ပေးပါဘူး……. ဘာလို့လဲဆိုရင် PDF ဆိုတာပြည်သူစစ်စစ်တွေကပဲ မွေးဖွားပေးလိုက်လို့…ပြည်သူရင်ခွင်ကထွက်လာခဲ့လို့ပဲ…..မတရားမူ​​​တွေမတရားလုပ်​နေတာ ​တွေကို မခံနိုင်လို့ ပြည်သူ့ကာကွယ်​ရေး PDF ဆိုတာ ​ပေါ်​ပေါက်လာရတာပါ ဒါ​ကြောင့်မို့ အခုလို လုရက်ခိုးဆိုး သတ်ဖြတ် မတရား လုပ်​နေတာ​တွေကို PDF​​တွေလုပ်တယ် ​ပြောထွက်တာ မလွန်ဘူးလားဗျာ အသဲထဲကနာကျင်ရပါတယ်ဗျာ.. ဘယ် PDF …
ရန်ကုန်၊စက်တင်ဘာ(၁၇) လက်ရှိအခြေအနေမှာ အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတဲ့အတွက် တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ဖို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မနေ့ကစက်တင်ဘာလ(၁၆) ရက်နေ့မှာ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးနဲ့ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေ၊ မြို့မိမြို့ဖတွေနဲ့ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ခန်းမမှာ တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြားချိန်မှာ ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ထုတ်ကုန်တွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပေမယ့် အခြေခံစားသောက်ကုန် ဈေးနှုန်းတွေ မြင့်တက်နေတာဟာ သဘာဝမကျတဲ့အတွက် …
August 17, 2021 - by kiwi - 1 Comment